एनआरएन एनसीसी अमेरिकाको १० औं बार्षिक साधारण सभालाई प्रश्न – Dcnepal
एनआरएन एनसीसी अमेरिकाको १० औं बार्षिक साधारण सभालाई प्रश्न
बिष्णु सिंह (बैजु)
प्रकाशित : २०७८ असार १९ गते २२:१८
एनआरएन अमेरिका २०२१ –२३ पदाधिकारीका लागि केन्द्र र राज्य निकायहरुको चुनाव पूर्व नै सदस्यता दर्ता र नवीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भई अब एनआरएन अमेरिकामा साधारण र आजीवन गरि २० हजार भन्दा बढि सदस्यहरु संगठित भए। आफू पनि स्वतःस्फुर्त रुपमा सदस्य बनाउन लागिपरेकोले खुशी र गर्व लाग्छ।
तर चुनाव हुँदैगर्दा ५ अध्यक्ष्यका प्रत्याशी मध्ये एक प्रत्याशी चाही आफूले चुनावमा अधक्ष्य पदका प्रत्याशी हुन शुल्क बुझाएको तर एनआरएनले आफूलाई चुनावमा भाग लिन बन्देज लगाएको र तिरेको २ हजार डलर फिर्ता पनि नगरेको खबर सुन्नमा आयो। तर एनआरएन भित्र कसैको पुच्छर नसमाएको र कुनै पदमा नबस्ने कुनै स्वतन्त्र, निष्पक्ष निकाय नहुँदा सदस्यले आफूलाई परेको अन्याय बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बुझियो। घरपरिवारमा बादबिवाद, मनमुटाव हुन्छ। तर त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय गर्नु भएको छैन भने बलियाले निर्धालाई शारीरिक र मानशिक चोट पुर्याउन सक्छ। अनि निर्धोले न्याय खोज्दै हिड्नु कुनै अपराध हुँदैन।
उदाहरणका लागि हालसालै नेपालमा संचारकर्मी रुपा सुनारले आफूलाई जातीय विभेद गरि मानशिक पीडा दिएकोमा कानुनी उपचारमा गइन्। राष्ट्रपतिले गैरसंबैधानिक कार्य गरि १४६ को समूहलाई प्रधानमन्त्रि नियुक्त नगरेको भनि अदालातमा मुद्दा दायर गरे। के अब रुपा सुनारलाई कतै कोठा भाडामा नदिने हो त ? झलनाथ वा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री वा एमालेको अध्यक्ष पदमा चुनाव लड्न नदिने हो त ? त्यसो हो भने प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक मुलुक भन्नु भएन।
सदियौंदेखि दासत्व र सामन्ती प्रथाबाट जन्मे हुर्केका नेपालीहरु अमेरिका आएर अमेरिकन हुन् वा बेलायत गैर बेलायती हुन्, अनि जति डिग्री लिउन, शुट लगाउन् वा गाडी चढुन्। तर तिनका दिमागबाट मौका पायो कि अरुलाई दमन गर्ने र आफ्नो हैकम कायम राख्ने प्रयास गरि हाल्छन्। यस्तै मौका अहिले विद्यमान एनआरएन एनसीसी अमेरिकाको बिधानले सृजना गरेको छ। बर्तमान विधानको धारा ११०सी ले अधक्ष्यको पदमा प्रत्याशी हुन रोक लगएको छ। यसले भन्छ, ‘एनआरएन एनसीसी बिरुद्ध कानुनी कारवाहीको पक्षधरले चुनाव हुँदैगर्दा अध्यक्ष पदमा चुनावमा भाग लिन नपाउने।’ कति हास्यास्पद १ कि त एनआर एनले भन्न सक्नु पर्यो संस्था बिरुद्ध कानुनी कारवाहीका पक्षधरले संस्थाको चुनावमा तलदेखि माथिसम्म कुनै पनि पदमा भाग लिन नपाउने।
नत्र यो अध्यक्ष पदलाई मात्र तोकेर बन्देज गर्नु त नियतबस सक्षम र काबिल व्यक्तित्वलाई नेतृत्वमा आउँन नदिने गुटको षडयन्त्र भएन र ? फेरि कुनै अन्यायमा परेको सदस्यले संस्थाका बिरुद्ध मुद्दा हालेको त पक्कै हुँदैन। किन कि उ आफै चुनाव लडेर संस्थालाई सबल नेतृत्व दिन्छु भनेर चुनावको माध्यमबाट संस्थामा आउँन खोजेको हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता मुद्दा भनेको संस्थामा तानाशाही भएर, आफूलाई मन नपर्नासाथ अरुलाई दबाउने र आफू हैकम जमाउने पदाधिकारी बिरुद्धको मुद्दा हुन्छ। त्यसकारण मुद्दा संस्था बिरुद्धको हो कि पदाधिकारी बिरुद्धको हो त्यो निक्र्योल नगरी कुनै सक्षम व्यक्तित्वलाई चुनावमा बन्देज गर्नु नितान्त गलत र अप्रजातान्त्रिक र मानवअधिकार बिरुद्ध हुन्छ। अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा बसेर यस्तो अप्रजातान्त्रिक बिधान बोकेर एनआरएन अमेरिका चल्नु के सुहाउला त ?
चालु एनआरएन १० औं बार्षिक साधारण सभाको विज्ञ सदस्य महानुभावहरुले यसलाई गहिरो छलफल र मनन गरि (१) विधानका यस्ता बुँदाहरु हटाउलान त ? अझै राम्रो पाइला टेकेर हिँड्न नसकेको संस्थाले मुद्दा मामलालाई हटाउन संस्था भित्रै (२) समस्या समाधान समुह गठन गर्लान त ? साथै (३) न्याय माग्न स्वतन्त्र न्यायिक संस्थामा जान बिना रोकटोक स्वतन्त्रता देलान त ?
चालु एनआरएन एनसीसी अमेरिकाको १० औ बार्षिक ( जुलाई ३–४) साधारण सभामा भाग लिन सदस्यहरुलाई जानकारी गराइयो। तर धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरुले उपस्थित नहुन भन्ने नियत बोकी हवाईजहाजबाट आउनेहरुलाइ एयरपोर्टबाट सुगम तरिकाले नजिकैको तारे होटलमा पुग्न सुबिधा हुने गरि तारे होटेल रोजियो।
न्युयोर्कमा नेपालीहरुको बाक्लो बस्ति रहेको एनआरएन सदस्यहरुको सुबिधा हेरिएन। २० डलर तिरी सदस्य बनेकाहरुले १०० डलर रजिष्ट्रेशन शुल्क तिरी सभामा भाग लिनुपर्ने भयो। संस्थामा फण्डरेज कार्य प्रभावकारी देखिएको छैन। अनि ‘आम्दानी अठनी खर्च रुपैयाँ’ ठूलो तारे होटलमा महँगो खर्च गर्नु कति बुद्धीमानी ? के यसले संस्थामा सवल नेतृत्वको कमि छ भन्ने देखाउँदैन ?
अनि सभामा भाग लिन सदस्यहरुलाई न कार्य प्रगतिको जानकारी छ, न आर्थिक बिवरण उपलब्ध गरिएको छ। अनि कुन आधारमा, के छलफल गर्ने ?
के सभामा हाई, हल्लो मात्र भन्ने हो ? कि गीत गाएर नाच्ने ? यसबाट नेतृत्व सक्षमतामा प्रश्न उठदैन र ? यो संस्थाको आर्थिक बर्ष के हो भन्नेसम्म यसले आईआरएसमा बुझाएको ९९० रिपोर्टमा देखिँदैन। अनि २ लाख ५४ हजार ९३० डलर २०१९ मा कँहा र के कार्यक्रममा खर्च गरेको भनि देखाएको छैन। के कार्यक्रम गरेको र कसले के कति लाभ पाए ? संस्थाको के कस्तो हित भयो ? कतै कुनै रिपोर्टमा उल्लेख छैन। जुलाई २०२१ मा सभा गर्दा २०२० को रिपोर्ट नै नल्याएर सभा गर्दा के बिषयमा सभा गर्ने ?
यी सबै गतिबिधिबाट के एनआरएनमा सबल र सक्षम नेतृव र पदाधिकारी आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट छ। विज्ञ सदस्य साथीहरुले यी सबै बिषयमा गहन छलफल गरि संस्थालाई अग्रगामी र प्रगतिशील बनाउनु हुनेछ भन्ने धेरैले आशा गरेको बुझिएको छ।
बिष्णु सिंह (बैजु) (आजीवन सदस्य)